Gobollo badan oo Mareykanka ka tirsan oo bandawgii laga qaadayo – Geelle Magazine
Gobollo badan oo Mareykanka ka tirsan oo bandawgii laga qaadayo
caliahmed Posted On April 27, 2020
Gobollo badan oo Mareykanka ka tirsan ayaa bilaabaya in ay qaadaan amarrada bandawga, iyadoo dhanka kalena hogaamiyeyaasha Mareykanka ay yidhaahdeen kala fogaanshaha bulshadu waa mid lagama maarmaan noqon doonta xagaaga oo dhan.
Laakiin guddoomiyeyaasha ayaa ka digaya in noloshu si dhakhso ah usoo laaban doonin sidii caadiga ahayd, xayiraadahaasi waxay kusii negaan doonaan meelaha qaarkood si looga ilaaliyo inuu fayrasku soo laba kaclaynin.
Jimcihii, Mareykanka wuxuu arkay kor u kacii ugu badnaa hal maalin gudaheed ah, kiisaska la xaqiijiyey.
Laakiin heerka fayraskan ayaa si aad ah hoos ugu dhacay dhowr meelood oo ay ka mid yihiin New York, oo ahayd xudduntii fayraskaasi ee Mareykanka.
xogtii ugu dambeysay ee Axaddii, Mareykanka waxa ay marayaan dadka qaaday 940,000 kiis, sida laga soo xigtay Jaamacadda Johns Hopkins iyo in ka badan 54,000 oo dhimasho ah.
Khubarrada caafimaadka bulshada ayaa ka digaya in ka noqoshada xayiraadaha ay sababi karto mowjad labaad oo cudurkaasi ah.
Go’aanka lagu joojinayo amarrada qasabka ah ayaa imaanaya iyadoo in ka badan 26 m oo Mareykan ah ay raadinayaan wax ka difaaca shaqo la’aanta, iyadoo heerka shaqo la’aantuna ay gaadheyso ilaa 16%.
In ka badan 90% dadweynaha Mareykanka waxay ku jireen xaalad amarro lagu soo rogay oo lagu yaraynayo dhaqdhaqaaqooda, laakiin gobollada qaarkood waxay billaabeen in ay amarradaasi laalaan maalmaha sabtida iyo axadda, iyagoo dadku si tartiib tartiib ah ugu noqonaya goobaha dumarka lagu qurxiyo iyo meelaha timaha lagu jaro.
Georgia, Oklahoma, Alaska iyo South Carolina waxay horey u oggalaadeen in ganacsiyada qaar dib loo furo. Iyaga iyo gobollada kaleba waxay soo saareen qorsheyaal ku baaqaya in xeerar badan la qaado toddobaadka soo socda.
Tennessee waxay u oggolaan doontaa maqaayadaha in ay dib u furaan Isniinta, isla maalintaas oo amarkii khasabka ahaa ee Mississippi uu dhacayo.
Guddoomiyaha Montana ayaa u oggolaaday kaniisadaha in ay dib u furaan laga bilaabo maalinta Axadda, iyada oo weli loo baahan yahay tallaabooyin ay ka mid yihin kala fogaansho bulsheed.
Makhaayadaha iyo iskuullada ayaa loo ogolaan doonaa in ay dib u furmaan 7-da May.
Sideed gobol oo ay hogaaminayaan gudoomiyeyaasha jamhuuriga – Arkansas, Iowa, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Utah iyo Wyoming – waligood ma soo saarin amarradii qasabka ahaa ee ay ugu mudnaayeen guri ku negaanshuhu.
Axadii, iskuduwaha hawlaha ku aaddan coronavirus ee Aqalka Cad, Dr Deborah Birx ayaa sheegtay in kala fogaanshaha bulshadu ahaan doono mid caadi ah “ilaa xagaaga si runtii loo hubiyo inaan is ilaalino marba marka ka danbaysa”.
Hadaladeeda ayaa yimid kadib markii madaxweyne ku xigeenka dalkaasi Mareykanka Mike Pence uu sheegay in fayrasku uu joogo “gadaasheenna” iyadoo loo dabbaaldegayo maalin xuska 25-ka May oo ah maalin ciid ah, taas oo tilmaamaysa bilawga rasmiga ah ee xilliga xagaaga ee Mareykanka.
Dr Birx ayaa u sheegtay Fox News usbuucan in kiisaska cusub iyo dhimashada “si weyn hoos ay u dhici doonaan bisha May”.
Axadii, gudoomiyaha New York Andrew Cuomo ayaa sheegay in ay tahay wax aan macquul aheyn in lagu qasbo dadka in ay guryahooda ku negaadaan inta lagu jiro xagaaga oo aan waxba la qaban.
“Halkan waxaa ka jira sinnaan loo wada dhan yahay,” ayuu yidhi, isaga oo tilmaamaya warbixinnada sheegaya rabshadaha qoyska, isticmaalka maandooriyaha iyo khamriga, iyo dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda oo la sheegay in ay sii kordheen.
Heerka dhimashada ayaa hoos u dhacay magaalada New York, iyadoo 367 qof ay dhinteen sabtidii marka la barbardhigo 437 jimcihii. Waxay ka dhigan tahay tiradii ugu hooseysay tan iyo 30-kii Maarso.
Guddoomiyaha wuxuu sheegay in heerka gudbinta iyo sidoo kale heerarka dhimashada, ay qeexi doonaan sida iyo goorta uu gobolka dib u furmayo.